Global Voices teny Malagasy » Somalia: Afaka mahazo asa mendrika ve ireo manao hijab any Etazonia? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Desambra 2018 17:42 GMT 1	 · Mpanoratra Abdurahman Warsame Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Somalia, Fahasalamàna, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta
Manoratra  (bilaogy voafafa) momba ny hasarotry ny fitadiavana asa mendrika ho an'ny olona manao hijab i Idil, bilaogera Somaliana monina any Etazonia:
miezaka mitady asa? hatraiza ny hasarotan'izany? toa tena sarotra be ny tiako tenenina hoe tsy afaka mahita asa mendrika akory aho izany hoe tsy hiverina ao amin'ny McDonalds aho na dia tsy manambola toy ny inona aza ny tiako tenenina hoe TSIA TSIA mivandravandra be….kanefa eny heveriko fa ny hijab no mahatonga izany ny tiako tenenina hoe vao mijery ahy ry zareo dia mety tsy manome lanja ahy akory…manontany tena aho raha mitombina ny eritreritro…ny tiako tenenina hoe mety ho izay tokoa aho, tena mba maniry aho indray andro any hanala ny hijab-ko ary hikarakara ny voloko hikojakoja ny tarehiko ary handeha hanao dinidinika araka asa…hijery izay tena miseho azonao? raha azoko na tsia…tena heveriko fa ho azoko satria tsy hieritreritra indroa akory ry zareo fa mety hisaina hoe “o, vehivavy mainty hoditra toa fotsy” tena tiako andramana izany petrakevitra izany…kanefa mbola kanosa indray aho!
Manoratra momba ilay vehivavy Somaliana mpanamory fiaramanidina voalohany indrindra i Royale Somalia:
I Asli Hassan  no vehivavy Somaliana voalohany indrindra nisidina tamin'ny 1976. Azonao vakiana anatinà vohikala vaovao  (rohy maty) natokana ho an'ny tantaran'ny Tafika an'habakabaka Somaliana ny tantarany sy ny zava-bitany goavana. Monina any Texas i Asli ankehitriny, izay nomena ny solonanarana hoe “Calan-Side na ilay Mpilanja Faneva”.
Maneho  (rohy maty) ny fahatalanjonany amin'ireo hetsiky ny Governemanta Federaly Tetezamita (hafohezina ho TFG amin'ny teny Anglisy) i Ainashe. Manorara izy fa:
Indrisy, toa tsy nandray anatra avy amin'ireo hadisoana taloha ny TFG. Tsy ny fitondràna andiam-bahiny hafa ao amin'ny firenena no vahaolan'ny fifandirana ara-politika mahatsiravina ao Somalia. Ny fanalahidin'ny fandriampahalemana maharitra dia ny adihevitra ara-politika misokatra sy mahitsy izay hahafahan'ny vahoaka Somaliana mamaha ny tsy fitovian-keviny amin'ny alàlan'ireo fantsona Somaliana, Arabo ary Silamo!
Miresaka  momba ny maripana mampivaingana any Minnesota i East African Philosopher, izay manoratra bilaogy avy any Etazonia:
Nambara tamin'ny fomba ofisialy ho vata fampangatsiahan'i Etazonia i Minnesota – tena marina? Tsy efa fantatry ny vahoaka ve izany? Raha mipetraka eo amin'ny seza famakiako boky mampahazo aina no sady mpitsabo aho, izay heverina fa hahatratra 10°C ny maripana, ny hany azoko atao dia ny mandefa ny fiaraha-mioriko amin'ireo vahoaka tsy maintsy mitsangana mandeha miasa na mandeha mianatra anatinà maripana henjana tahaka ny an'i Minnesota….Efa tany aho ary tsy mahafinaritra.
Mitatitra  momba ny valanaretina Kolera ao Mandera (vohitra iray any amin'ny faritany avaratra atsinanan'i Kenya) i Kenya-Somali:
Nanidy ireo trano fisakafoana rehetra tao amin'ny Vohitr'i Mandera ny sampandraharaha misahana ny Fahasalamam-bahoaka ao amin'ny Distrikan'i Mandera noho ny valanaretina Kolera.
Vokatr'izany, lasa tsy an'asa ireo mpiasa tanatin'ireo trano ireo. Nangataka ireo manampahefana mba hamaha ity krizin'ny fahasalamana ity ireo mpiasa ireo mba ahafahany manohy ny asany.
Taorian'io valanaretina io, olona enina no maty ary 125 hafa nalefa tao amin'ny Trano Fitsaboana ao amin'ny Distrikan'i Mandera.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/28/132065/
 Manoratra : http://newsomalia.blogspot.com/2008/02/first-somali-female-pilot.html
 Asli Hassan: https://fr.wikipedia.org/wiki/Asli_Hassan_Abade
 vohikala vaovao: http://www.somaliairforceclub.com/wpilot.htm